Ngokuzwakalayo kuqondwa ukwephulwa kwenkulumo, lapho umuntu ophethwe yisifo esinikezwayo ebiza amagama ngokukhubeka, ngokuvamile emsindweni wokuqala. Ake sikhulume ngokuthi singakuqeda kanjani ukuzishaya. Lesi sihloko sihambisana kakhulu, ngoba abakwa-stutterers (ikakhulukazi abadala) bavame ukungamahloni ukuya ukuya kudokotela.
Indlela yokuqeda ukuqhuma: indlela yendabuko
Indlela yendabuko yokwelapha ukudubula kuyisisetshenziswa sokuzivocavoca okukhethekile. Khumbula ukuthi abanye abaculi abadumile bahlabelela ngokukhululekile futhi ngokwemvelo, kuyilapho inkulumo yabo evamile ihambisana nokuthungatha, ukukhubeka noma ukukhwabanisa.
Ake sithathe isibonelo sokuzivocavoca okuyingxenye ye-"Strelnikova Gymnastics Yokuphefumula" nokuthi wonke umuntu ohlukunyezwa angenza ngaphandle kwezinkinga ekhaya. Ukwenza lokhu nokunye ukuphefumula okuvela enkimbinkimbi, uzofunda indlela yokuqeda ukuqhuma ngaphandle kokufuna usizo kudokotela.
1. Ipompo. Vuka ngokuqondile, wehlisa izandla zakho. Vula kancane, ujikeleze emuva. Amandla nekhanda kufanele anciphise, futhi uphumule intamo yakho. Ngokushesha uphinde uthule kalula endaweni ekugcineni yomthambeko, njengokungathi uyaphonsa phansi. Khulisa kancane, kepha ungaqondisi ngokugcwele. Ngalesi sikhathi, phefumula ikhala lakho noma umlomo wakho. Futhi, phindaphinda phambili, uhumushe, njll. Ukuzivocavoca kwenziwa kalula futhi akufaki isigaba esifundeni se-lumbar. Ngendlela eyodwa, phinda usebenzise izikhathi ezingu-8, bese uphumula imizuzwana engu-5 bese wenza enye indlela. Umkhuba we "Pump" ukuvivinya ngezindlela ezingu-12 ezinjalo. Noma kunjalo, umthwalo kulesi sibalo kufanele wanda kancane kancane.
2. "Ukuguqula ikhanda." Yima uqonde futhi ubeke izinyawo zakho ububanzi bamahlombe akho. Beka izandla zakho ezinhlangothini. Ukuguqula ikhanda ngakwesobunxele, bhala ngokushesha futhi ngokumangalisa. Bese ujika ikhanda lakho ngakwesokudla uphinde uphefumule. I-Exhale kufanele ibe phakathi kwesikhathi lapho uvula ikhanda lakho kusuka kwesobunxele kuya kwesokudla. Ngesikhathi esifanayo, akumele kube khona ukuma phakathi. Phakathi nalokhu kuvivinya umzimba, intamo akufanele iguquke, futhi i-trunk nezandla kufanele zihlale zingenasimo. Le ndlela iqukethe ukuphefumula okungu-8, futhi isimiso okufanele ugcine ukuzobhekana nayo yizinyathelo ezingu-32 ezinjalo.
Indlela yokuqeda ukuqhuma: izindlela ezingezona zendabuko
Imithi yokwelapha iphakamisa ukusebentisa i- acupressure ukuze kusize lowo ogulayo ukuba angene ekuthungeni ngenkinga yakhe. Mane nje ufuna ukuphawula ukuthi lokhu ukusikhipha umzimba kuyinkimbinkimbi futhi kuyinkathi echitha isikhathi, ngakho-ke funda ngokushesha ukuthi kuzodingeka uhambe ngezifundo eziningana, okunye okubandakanya izinqubo ezingu-15. Khona-ke ukuphumula kweviki ezimbili kuyadingeka.
Okokuqala udinga ukuthola iphuzu elidingekile. Usesho lwenziwa "ngu-tyky method", ngomqondo wangempela wezwi. Thola izithombe zamaphuzu asebenzayo kwi-Inthanethi noma ezincwadini ezikhethekile ezinikezwe ukukhishwa kwesikhumba. Push umunwe wakho ngomunwe wakho endaweni ehlosiwe. Uma uzizwa uphethwe futhi ubuhlungu obuhlungu, khona-ke uthola iphuzu elifanele. Okulandelayo, siqala ukusikhipha iphuzu, ukwenza i-paddle ye-index noma isithupha sezinyathelo eziyindilinga, kancane kancane sikhulise amandla okucindezela, bese sinciphisa. Ukuphumula kwephuzu ngalinye kufanele kudlule emaminithini amathathu kuya kwangu-5. Ngalesi sikhathi kufanele ukhululeke ngokuphelele.
Kukhona enye indlela engavumelani nayo, indlela yokuqeda ukuqhuma ekhaya i-hypnosis. Kodwa-ke, asikhuthazi ukuyisebenzisa ngokwakho, ngoba, uma kungekho ulwazi oludingekayo, isipiliyoni nokusebenza, lokhu kungaba yingozi empilweni.
Indlela yokuqeda ukuqhuma: indlela yesimanje
Namuhla, eneminyaka yobuchwepheshe obuphezulu, izinhlelo zekhompyutha ezikhethekile, ikakhulukazi "Ukulungiswa kwenkulumo", zingakusiza ukuba ubhekane nokuthungatha. Okubalulekile kwalokhu kuthuthukiswa ukuthi kuvumelanisa inkulumo nezikhungo zokuhlola abantu. Isisulu sokugaya i-nagovayvaet kumakrofoni, futhi uhlelo lwesigaba sokuhlukanisa ngokuzenzekelayo lulibaziseka inkulumo yakhe. Ngakho-ke, i-stutterer, ezwa izwi lakhe siqu ngokulibaziseka kancane, ijwayele ukulungiswa kuye. Ngokuhamba kwesikhathi, inkulumo yakhe iyaqhubeka futhi igxilile. Ngakho-ke, kungenzeka ukunciphisa ukukhubazeka kwenkulumo ngo-75-80%.
Ukusikwa kwe-segmental: izinhlobo, izimbangela, amasu, amasu. Kunalokho ukuhlunga okuyingqayizivele kuhluke ekusikeni kwe-segmental
Homemade ikhibhodi ekhanyayo noma indlela yokuqhuba ikhibhodi ebumnyameni
Buritos Mexican: isidlo esilula nge umlando onothileko
Lake Winnipeg: incazelo, izici, izithombe